အသာဝနီနက္ခတ်(Arietis) Ashwini • VECTOR
Vector white color Logo Project File (8 Dec 18)
အခမဲ့ Register လုပ်ရန်
ဝေဒပညာ နိဒါန်း ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဝေဒ မဂ္ဂဇင်းမှာ ဆရာကြီး မိုးတားဆရာဉီးထွန်းရှိန်က နက္ခတ် (၂၇) လုံးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆောင်းပါးတွေ ရေးခဲ့တာကို ဖတ်ဖူးတဲ့သူတွေ တော်တော်များများရှိကြမှာပါ။ဆရာကြီးရေးတာတွေကို စောင့်ဖတ်ရင်း တစ်ပုဒ်ပြီးသွားတိုင်း အဲဒီနက္ခတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး တွေးစရာ ၊ ကြံစရာတွေ တသီကြီးကျန်ခဲ့လေ့ရှိပါတယ်။
အဲဒီလို ဆရာကြီးရေးခဲ့တဲ့ဆောင်းပါးတွေကို အခြေခံပြီး လက်လှမ်းမှီရာစာအုပ်တွေရှာကြံဖတ်ရင်းနက္ခတ်(၂၇)လုံးအကြောင်းလေးတွေကို မှတ်စုရေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲလိုရေးခဲ့တာလေးတွေကို နေ့စဉ် ပြန်လည် မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
၁ ။အသာဝနီနက္ခတ် (Arietis) Ashwini
"အသာဝနီ၊ကိုးလုံးညီ၊တူပြီမြင်းခေါင်းလို" ဆိုတဲ့အတိုင်း အဘိဓာန်ဋီကာမှာ  "အဿရူပ  ယောဂတော ၊မြင်းရုပ်နှင့် တူသောကြောင့် အဿယုဇော-အသဝနီနက္ခတ်မည်၏"ဟူ၍ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားပေသည်။ဒေဝတာအားဖြင့် အမွှာ နတ်ဘုရားဖြစ်သည်။ဆေးပညာ ၊ သိပ္ပံပညာများနှင့်လည်း ဆက်နွယ်သည် ။ငယ်ရွယ်သော မြင်းစီးသူရဲကောင်းများလဲဖြစ်ကြသည်။ဘယ်တော့မှ မငြီးငွေ့နိုင်အောင် ခရီးသွားနေသူများလဲဖြစ်သည်။ ကူညီမှု၊ အမှန်တရား၊ နုပျိုမှု၊ ကျက်သရေရှိမှု၊ ကြော့ရှင်းမှု စသော ဝိသေသလက္ခဏာများ သဘောတရားများကို တွေ့ရပေသည်။ အသဝနီ ဆိုသောစကားလုံးသည် တစ်စုံတစ်ရာကို တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ ပြောင်းရွှေ့ခြင်း ကို လှုံ့ ဆော်သည့်စွမ်းပကား လို့ အဓိပ္ပာယ်ရ သလို မြင်းစီးသူတစ်ဦးအဖြစ် အဓိပ္ပာယ်ရတယ်လို့လဲ ဆိုကြပါတယ်။
အသဝနီနက္ခတ်သခင်သည် ကိတ်ဖြစ်ပြီး ရာသီသခင်သည် အင်္ဂါ ဖြစ်သဖြင့် ကိတ် နှင့် အင်္ဂါ တို့ ကြောင့် အင်အားအစွမ်း ၊ မီး ၊ ရန်လိုခြင်း ၊ အလိုဆန္ဒများ၊ ကောင်းမှုနှင့်မကောင်းမှု၏ခရီး၊ နှင့်လွတ်မြောက်ရေးခရီးစသဖြင့် ကိုယ်စားပြုနေပေသည်။ထို့ပြင် ်ရန်လိုသောချဉ်းကပ်မှုသို့မဟုတ်ရဲရင့်သောသတ္တိရှိသည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမျိုးများရှိနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသူသည်စွန့်စားရမှုများကိုမကြောက်ဘဲသူ၏ပြိုင်ဘက်များ(သို့မဟုတ်)စီးပွားရေးပြိုင်ဘက်များနှင့်ဆက်ဆံခြင်းကိုသက်တောင့်သက်သာရှိလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။ အမွှာညီနောင် ဖြစ်သဖြင့် နှစ်ခု ၊ နှစ်ခွ ၊ နှစ်မျိုး ကိုဖြစ်စေတယ်။အမှောင်နဲ့အလင်း၊သေခြင်းနှင့်ရှင်ခြင်း ၊နေ့နဲ့ည၊အဝိဇ္ဇာ နဲ့ ဝိဇ္ဖာ ၊ မွေးဖွားခြင်းနဲ့သေဆုံးခြင်း ၊ စသည်တို့ကို ကိုယ်စားပြုသည်။
အသာဝနီကို Tama Guna တမဂုဏ လွှမ်းမိုးပါတယ်။အဲဒီဂုဏ်သတ္တိကတော့ ဒုက္ခပေးမယ့် အဆိုး(ဒုစရိုက်)တွေကို သုခပေးမည့်( အကောင်း ) သုစရိုက်သို့ ဦးတည်သွားအောင် လုပ်ဆောင်ရာမှာ အလွန်ပဲ အရေးပါတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ပုံပြင်ထဲမှာဆိုရင် အသာဝနီကုမာရ က သူရဿတီ နတ်သမီးနဲ့ ဘုရားကို ပူူဇော်တဲ့ထဲမှာ ပျားရည် သာမက ဝိုင်(စပျစ်ရည်)ကိုပါ ထည့်ပြီးပူဇော်ခဲ့တယ်။ဝိုင်(စပျစ်ရည်ကို ဘုရားမကြိုက်တာသိပေမယ့် ကိုးကွယ်တဲ့ကျင့်ထုံးအရ ထည့်တာလို့လဲပြောတယ်။ဒါဟာ ဆိုရင် အမှားမှ အမှန်ကိုရည်ညွှန်းတယ်လို့လဲ ယူဆကြတယ်။
ပုံပြင်ထဲမှာ ကယ်တင်ကုသတာတွေ ၊ အိုမင်းခြင်းကို နုပျိုခြင်းနဲ့ အစားထိုးတာတွေ ၊ ပင်လယ်မှာရေနစ်တာကိုကယ်တင်တာတွေ ၊ နတ်မိစ္ဆာက ရေနွေးပွက်ပွက်ဆူထဲကို မပစ်ချအောင်ကူညီတာတွေ စသဖြင့် ပါဝင်တာမို့ ဓမ္မတာကို လွန်ဆန်နိုင်သော အံ့သြဖွယ် အဖြစ် ဝိသေသနပြုရတဲ့ အထိဖြစ်ပါတယ်။
အသာဝနီ နက္ခတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သင့်တော်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကတော့ စစ်တပ်အရာရှိများ၊ ရဲအရာရှိများ၊ ရေတပ်အရာရှိများ၊ အားကစားသမားများ၊ ဆရာဝန်များ၊ သရုပ်ဆောင်များ၊ အကသမားများ၊ အဆိုတော်များ၊ တေးဂီတပညာရှင်များ၊ စာရေးဆရာများ၊ စူးစမ်းရှာဖွေသူများ၊ သုတေသီများ၊ နက္ခတ်ဗေဒင်ဆရာများ၊ ကုသသူများ၊ စိတ်ပညာရှင်များ၊ မီးသတ်သမားများ၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့်နည်းပညာ၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ ဆေးဝါးလုပ်ငန်း၊ မြင်းများ၊ ကားများနှင့်အထူးသဖြင့်အလွန်လျင်မြန်စွာလည်ပတ်နေသည့်လုပ်ငန်း၊ လေကြောင်းလုပ်ငန်းနှင့်အခြားကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များစွာတွင်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၊ အတိုင်ပင်ခံများ၊ ကုထုံးများ၊ စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန် စသဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်။
U THAN HTUN OO
Consultant Kp Astrologist
Nextဘရဏီနက္ခတ် ( Bharani )Next
ကိုယ့်ရဲ့ UI Project အတွက် Design System ရှိပြီလား?
ကံဇာတ်ဆရာ နဲ့ ဉာဏ်အတိုင်းအတာ
နေမင်း၏တစ်နေ့တာခရီးနှင့်ဘာဝ ၁၂ ပါး
၁၂ ရာသီစက်ဝန်း အကြောင်း
Facebook Twitter Youtube Medium Pinterest
© 2009 - 2022 Vector Online Learning Platform.
Login with Social Media and SMS